Weerarkii Hotel Naasa hablood oo la soo afjaray & Khasaaraha oo kordhay(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ciidamada amaanka dowlada Somalia ayaa goor dhow oo caawa ah shaaciyey iney soo afjareen weerar isugu jiray ismiidaamin iyo mid toos ah oo galabta xoogag taabacsan Al-shabaab ku galeen hotelka Naasa hablood oo ku yaalla agagaarka isgoyska Km4 ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaa warbaahinta u xaqiijyey iney la dilay dhamaaan kooxihii weerarka soo qaaday, ayna hotelka gacanta ku hayaan ciidamada amaanka.
Cabdifataax Cumar Xalane waxaa uu intaas ku daray iney ku mashquulsan yihiin qiimeynta khasaaraha ka dhashay weerarkan oo socday galabta illaa caawa fiidnimdii hore.
Xaalada Hotelka Naasa-hablood ayaa xiligan degan mana jiraan wax rasaas iyo qaraxyo ah oo la maqlay tan iyo salaadii cishaha ka dib xiliga Muqdisho.
Dhinaca Shaqaale ka tirsan idaacadda goob joog ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid noqday dadka ku dhintay weerarka galabta ka dhacay Naasa hablood.
Shaqaalaha geeriyooday ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Gaani Axmed Cabdulle, Max’ed Nuur Daahir iyo Sahal Ibraahim Fanax, waxayna ilaalo ka ahaayeen gaari ay leedahay idaacadda oo ku sugnaa hotelka.
Sidoo kale, Mid ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Muqdisho oo magaciisa la oran jiray Ducaale Shahiid ayaa ka mid ahaa dadka weerarkan ku dhintay kaasoo sidoo kale ka mid aha bahda jaamacada Banaadir.
Aabihiis Dr. Shahiid oo ahaa dhaqtar caan ah kana mid ahaa asaasayaasha Jaamacada Banaadir ayaa isna ka mid ahaa dadkii ku naf waayey qaraxii ka dhacay sanado ka hor Hotelka Shamo.
Ugu yaraan 20 ruux ayaa la rumeysan yahay iney ku dhinteen weerarkan inta la xaqiijiyey halka tiro kale oo intaa ka badana ay ku dhaawacmeen.
Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee Al-shabaab ay ka geystaan magaalada Muqdisho tan iyo markii guda galay bishan barakeysan ee Ramadaan, wuxuuna ku soo aaday xili shacabka Muqdisho uu weli dhegahooda ka sii guuxayo weerar kan la mid ahaa oo 25 maalmood ka hor lagu qaaday hotelka Ambasador oo wax badan aan ka fogeyn hotel Naasa hablood, iyadoo weerarada noocan ah ay joogto ka ahaayeen sanadahan dambe magaalada Muqdisho.
A Somali government soldier runs to take position during gunfire after a suicide bomb attack outside Nasahablood hotel in Somalia’s capital Mogadishu, June 25, 2016. REUTERS/Feisal Omar
A man raises his hands as he walks from the scene of a suicide car bombing outside Nasahablood hotel in Somalia’s capital Mogadishu, June 25, 2016. REUTERS/Feisal Omar
Wasaarada Amniga oo shaacisay tirada dadkii ku dhintay weerarkii Hotel Naasahablood